‘हाइट’ नबढेर चिन्तित हुनुहुन्छ ?पढ्नुहोस केही यस्ता एक्सरसाइज जसले शरीरको लम्बाई बढाउनेछ ,…. – News Nepali Dainik
‘हाइट’ नबढेर चिन्तित हुनुहुन्छ ?पढ्नुहोस केही यस्ता एक्सरसाइज जसले शरीरको लम्बाई बढाउनेछ ,….
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण ०१, २०७७ समय: ८:२६:०६
मान्छे निश्चित उमेरपछि बढ्न बन्द हुन्छ भन्ने गरिन्छ । तर विज्ञहरु यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनीहरु भन्छन् केही यस्ता एक्सरसाइज छन् जो नियमित गर्ने हो भने शरीरको लम्बाई बढाउन मद्दत गर्दछ ।
शरीरको लम्बाइ बढाउनका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय हो स्किपिङ । जसलाई हामी सामान्य भाषमा डोरी खेल्ने पनि भनिन्छ । यसको माध्यामबाट शरीरमा रक्त संचार सही बनाइराख्छ जसले शरीरको हड्डीको लम्बाई बढाउन निरन्तर दबाब बनाउनेछ । यसका साथै बास्केटबल खेलले पनि शरीरको लम्बाइ बढाउन मद्दत गर्दछ ।
शरीरको लम्बाइ बढाउने अर्को उत्तम उपाय हो पौडी । दैनिक २ घण्टा पौडी खेल्ने हो भने लम्बाई बढाउन काफी मद्दत पुग्ने विज्ञहरुको भनाई छ । कोब्रा स्ट्रेच अर्को महत्वपूर्ण कसरत हो । यसका लागि जमिनमा उल्टो पल्टिएर हातलाई जमीनमा टेकाउनुपर्छ । यस दौरान हात तपाइको पेटको भागको नजिक हुनु आवश्यक छ ।
फेरि शरीरको अगाडिको भाग विपरित दिशाामा स्ट्रेच गर्नुपर्छ । यसलाई कम्तीमा ३ देखि ४ पटक दोहोर्याउनुपर्छ । सिटेड फरवार्ड बेड अर्को कसरत हो । यसमा भुईँमा बसेर दुवै खुट्टा अगाडि सिधा राख्नुपर्छ । त्यसपछि दुवै हात माथि राखि उठाउनुपर्छ ।
Last Updated on: February 13th, 2021 at 8:26 am